यी ३ कुरा जसले तपाईंलाई जीवनमा असफल बनाउन सक्छन् - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips यी ३ कुरा जसले तपाईंलाई जीवनमा असफल बनाउन सक्छन्
हाम्रो प्रगति र खुशीको बाधक हामी आफै हौँ । हाम्रो सोंच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बानी, हामीले लिने निर्णयले हाम्रो सफलता र खुशीमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् ।
स्वतन्त्रता प्रतिको गलत बुझाई
स्वतन्त्रता भनेको अझ राम्रो बन्न पाउने, अगाडी बढ्न पाउने अवसर हो । स्वतन्त्रतासंगै दायित्व पनि आएको हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा हामीले स्वतन्त्रतालाई गलत अर्थमा लिन्छौं । स्वतन्त्रता भनेको आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने अधिकार हो भन्ने सम्झिन्छौँ । जब स्वतन्त्रतालाई यसरि गलत रुपमा लिन थाल्छौं, हाम्रो जीवन तहस नहस हुन समय लाग्दैन।
‘अरुले के सोंच्लान् ‘ मानसिकता
आवश्यक अनुशासन भन्दा पनि हामी अरुले के सोंच्लान् भन्ने मानसिकताले काम गर्छौं, बोल्छौँ । र, यो सोंचले हाम्रो योजना, हाम्रो सपना संगै सम्झौता गर्न समेत पछि पर्दैनौ । अरुले के सोंच्लान् भन्ने कुरा दिमागमा बढी ल्याउन थालियो भने हामी आफै आफ्नो प्रगतिको बाधक बनिरहेका हुन्छौं, हामी आफ्नै खुशीको शत्रु बनिरहेका हुन्छौं ।
‘अरुले के गरिरहेका छन् ‘ पछ्याउने मानसिकता
मानिसका सबैका आ-आफ्ना विशेषता हुन्छन् । हामीले अरुले के पढिरहेका छन्, के गरिरहेका छन्,, कसरि गरिरहेका छन् भन्नेमा बढी समय बिताउँछौ र त्यही अनुसार नक्कल गर्न थाल्छौं । अरुको नक्कल गरेर तपाईं केही पर पुग्न सक्नुहोला तर तपाईंले हासिल गर्नुपर्ने जुन उचाईको सफलता हो, त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्न । सफल व्यवसायी ज्याक माले भनेका छन् , ” अरुको नक्कल गर्यौ भने तिमी हराउँछौ ” । आफू को हूँ, आफ्नो क्षमता के छ ? आफ्नो रुची के हो, के गर्न चाहनुहुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् । तपाईंको क्षमता अनुसार, तपाईंको सिप अनुसार अरुले गरिरहेको काम नै पनि फरक तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ ।
Previousभोल्टायरका प्रसिद्ध भनाइहरु
Nextरतन टाटाका जीवनोपयोगी भनाइहरु